Seenaa Gootota Oromoo- Tolchaa Wagii Irraa | QEERROO
Dargiin namoota akka Mullataa Fayisoofa Jalduutti eerga nu biraa fiixee namooni lubbuun haafine sababii adda addatiin harka isaani seenne. Dugiddi keenya amma qunca’uutti reebamine. mana hiidhaa Amboo keessatti lukitti keenya sansalaata(Chain) Kilo grama 10 ulifatun hidhamine teenye mana hiidha keessatti boolli nutti itti ajjeefaminu balinaan qotameera. Harr’a ykn booru ajjeefamina jennee of irratti egachaa turre. Namooni Jalduu irraa qabamine abbaa kiyya fi obboleessa kiyya dabalate namoota 12 turre. Magalaa Amboo keessaa beekitonni Oromoo gara 50 kan ta’an baadiyyaa waddeessa fi Xulee keessaa Qotee bulaan Oromoo dhimma Obbo Arga’oo Diinqatiin qabamanii mana hiidhaa kana keessatti rebamaa jiru. Namini yeroo sana Bulichaa koonyaa Jibaatif Maaccaa ture Kol. Baqqalaa Dagguu (Oromo) yeroo ammaa biyyan ani jiradhu kana kan jiru namiini lammii Amaraa ture ajajaa 50 Maatamee Bakuru du’aa nu irratti murteesanii galgala,galgaala nu ajjeesu jennee eeggachaa osoo jirruu waggaa gunne.(Dargiin bara sana nama ajjeessuu fedhan halkan halkan gadi basanii ajjeesu) Guyyaa tokko halkaan keessaa sa’aa 2:00 Am tti waranni Dargii mana hiidhaa Amboo bananii seenudhan harka keenya nama lama laman walitti nu hiidhanii nu fudhanii qajeelan. Akkataa isan walitti nu hidhaniifi meeshaa warana nu irra dhaban 100/100 nu ajjeesu jennee murtesineera. Anifi Alamuu Lammeessaa harki keenya laman walitti hidhame. Alamuun Wa’ee Obbo Arga’ootii hiidhame. Halkaan sana nu fudhanii nu ajjeesuu jennee osoo eeginuu waan dhagayaan hin beekuu mana hiidhaa adda addatti nu darbbatan. Akka carraa ta’ee aniif abban kiyya mana hiidha Finfinnetti nu geessan.Torban tokko ” Alam-baqqanyi “keessa ergaan jiradhee, Nagasaa Kumsatiin wal bare. Ani yeroo sana ijoollee waggaa 13 ture. Namooni maqaa Oromootiin hidhaman heddudha. Nagasaan of biratti na fudhate. mana hidhaa lakkoofsa 2 kana nama dhibba torba qabu keessatti waliin jirachuu eegalle. Nagasaan bifaan qallaa dheeraa, nama hunda biratti nama jalatamu ture. Bayyeen isa jaladha. Innis bayyee na jalata. nyaata waliin nyaana. wal jala ciifiina. Nagasaan qabamee kan hiidhame Bushoofitu uminna Qileensa (air force)keesssaa ture. Dawud Ibsaa irriyaa isaatii walumatti aanee ciifiina. Nagasaan waanitti na dhookisuu anis wanitiin isa dhokissu hin turre. Keessattuu wa’ee Oromummaa waa heddu, irraa baradheera. Guyyaa gaafa tokko bara 1985 Nagasaan akkasitti jaladhu sana of biran dhabe.
Mana Hiidhaatii baduu isanii
Ganama walumaan Ciiree nyannee addaan baane. Nagasaa fi Dawud waliin jechudha. Isaan osoo irriyooni isanii kamuu osoo hin beekin Nagasa Kumsaa, Dawsud Ibsaa fi Aman Hundee waliin akkataa mana hidhatii ba’anii, Waraana Blisummaa Oromootti makaman irratti hojjataa erga turanii bubulaniiru. namini beeku tokkollee hin ture. Nagasaan namini akkasitti na jalatu sun, natti hin himine. Dawud Ibsaa Obboleessi isaa Tolasaa Ibsaa manuma hiidhaa kana keessa ture hin beeku. Jarreen sadeenuu Bulinchiinsa mana hiidhaa Sanaa, Poolisiidhaan ajjabamanii dhaqanii mana yalaa haa deba’an kan jedhu eeyaama argataniiru. Isaan sadeenuu akkuma ganama ba’anii gara mana hiidhatti hin deebine.Dargiin isaan ajjeesuuf qoophawaa osoo jiru,isaan ofii isanitiin of hiikan. Halkaan sana Polisooni mana hiidhaa sanaa jeeqamaa bulaan bara sana Dargii biratti “dhippoo”(narrow nationalist) jedhamanii hiidhamuun yakka kaminuu olitti ilaala. Halkan gutuu Poolisoon mana hiidhaa sana eegan, akka waan lilimmoom jalaa bade bakka isaan ciisaan dhufanii ilaalaa bulan. Jarreen sadeenuu baatii sadiin booda waraana ABO godiina dhii’aa jiru bira ga’aniiru kan jedhu oduu dhageenye. Oromoon dhimma kanaan hidhamanii jiran hundu hedduu gamadan. Sanaan booda Mootummaan abban irree Dargii kufee Nagasadhaan osoo lubbun jiruu Waajiira Gullalee keessatti wal agarre. Nagasaan amma gaafa ajjeefamuutti Dirree dhi’aa ture.
Nagasaan Jalaali fi kabajaan inni Qabsa’oota Oromoo,WBO biratti qabu adda ture. nama hunda ijaa tokkon kan ilaaluu yoo jirate Nagasaa Kumsaati. bara 1991 yeroo ABO Gullalee jiru, waraana irraa adda ba’ee Finfinneen jiradha jedhe ol hin dhufine. Nama laammii fi firri jalatu biyyeens jalatti akka jedhan sana ta’ee Nagasaan osoo diinaan hin ajjeefamiin nama ofii kan isaa waliin jiruun ajjeefame. Seenaan isaa bara baraan nu waliin jiraata.